Home News Beelo ku dagaalamay Gobolka Galgaduud oo waan-waan la dhex dhigay
Waxaa heshiis horu-dhac ah laga gaaray dagaal deegaanka Turbi ee duleedka degmada Balanbale ee Gobolka Galgaduud ku dhexmaray laba maleeshiyo beeleed kaas oo sababay dhimashada 4 Ruux.
Heshiiskaas ayaa waxaa siwadajir ah uga qyeb qaatay Guddiga xasilinta iyo Saraaksiiha Ciidamada Qalabka sida qeybta 21aad ee deegaanada Galmudug,waxaana ka soo baxay qodobo dhowr ah oo horu-dhac u ah.
Heshiiskaas.Qodobada kasoo baxay ayaa waxaa ka mid ah.
1- in la kala dhex dhigay Xabad Joojin rasmi ah
2: In Maanta oo Sabti ah ay kala dirayaan Odayaasha Dhaqanka Maleeshiyaadka labada beelood
3:-Qofkii ama Kooxdii lagu arko,iyada oo hub ku dhexwadata inta u dhaxeysa Balanbale iyo Guriceel in hubkaas laga qaadayo dib dambana aan loogu celin doonin,hadii uu dagaal ku galana tallaabo laga qaadi doono.
4:-In 10ka Bishan Decembar Magalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ay Gogol Nabadeed isugu yimaadaan Odayaasha dhaqanka labada beelood.
5:-In inta laga gaarayo Gogosha Nabadeed ee la dhigay Guriceel ay amniga deegaanadii lagu dagaalamay ay ku sugnaan doonaan ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Markii ay soo baxeen qodobada heshiiska laga gaaray dagaal beeleedkii ka dhacay deeganka turbi ee duleedka Balanbale,waxaa aqbalay Odayaasha labada dhinac oo ay kala matalayaan Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur iyo Ugaas Barre Axmed Cali (Taakooy).
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan guddi ka qeybb qaata nabadeyntaas waxa uu u diray Gobolka Galgaduud,waxana guddigaas horkacayay taliyihii hore ee Ciidanka xoogga dalka Janeraal Gorod iyo Cali Yare Cali oo ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya.
Previous articleMaxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xukun riday
Next articleMasuuliyiin dhowr ah oo Madaxda Dowladda ku dhaliilay Ciidamadii la geeyay Baydhabo
War Deg Deg : Wiil uu dhalatay Senator Cabdi...
RW Kheyre oo waqti iyo qarash ku luminaya shir aan isaga...